बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ ललितपुरका किसान – NewsAgro.com
बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ ललितपुरका किसान
February 4, 2014 newsagro 1,367 Comments
ललितपुर, माघ २२/ कृषिविज्ञ नारायण भण्डारीले अरू तीनजना किसानसँग मिलेर गत वैशाखदेखि व्यावसायिक गोलभेँडा खेती शुरू गरे । ललितपुरको धापाखेलमा आठ रोपनी जग्गामा फैलिएको उनको फार्ममा सृजना जातको गोलभेंडा खेती गरिएको छ । उनले एक रोपनी जग्गामा चार/पाँचओटा प्लाष्टिक टनेल बनाएका छन् । ती टनेलमा ८ सय बोटसम्म गोलभेंडा रोपेका छन् । भण्डारीका अनुसार एउटा बोटबाट ६ महीनामा १० किलोसम्म गोलभेंडा उत्पादन हुन्छ । ८ लाख रुपैयाँको लगानीमा शुरू गरेको यो फार्मबाट आफ्नो समूहले प्रतिमहीना रू. २० हजारदेखि रू. २ लाखसम्म आम्दानी गरिरहेको भण्डारी बताउँछन् ।
ललितपुरकै ठैब गाविस बाडेगाउँका कृषक जोगबहादुर मर्हजनले पनि प्लाष्टिक टनेलभित्र गोलभेंडा खेती शुरू गरेका छन् । परम्परागत खेतीबाट सन्तोषजनक आम्दानी हुन नसकेपछि व्यावसायिक खेतीतर्फ लागेको उनको भनाइ छ । ३ रोपनी जग्गामा गोलभेंडा रोपेका उनले वार्षिक ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताए ।
पछिल्लो समय ललितपुरमा मौसमी व्यवसायिक खेतीसँगै बेमौसमी तरकारी खेती पनि बढ्न थालेको छ । उपत्यकामा निकै ठूलो बजार भएकाले ललितपुरमा बेमौसमी तरकारी उत्पदन गर्न सहज भएको कृषिविज्ञहरूको भनाइ छ । यो वर्षको हिउँदमा ललितपुरमा बेमौसमी तरकारीको खेती १३ दशमलव ६५ प्रतिशत बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, ललितपुरका योजना अधिकृत हरिप्रसाद पण्डितले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष हिउँदे तरकारी खेती शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत र वर्षे तरकारी खेती १ दशमलव २८ प्रतिशत घटेको छ ।
समग्र तरकारी उत्पादन घटे पनि बेमौसमी तरकारीको उत्पादनमा सुधार भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार गत आवमा ललितपुरका किसानले २ हजार ५ सय प्लाष्टिक टनेलमा गरेको गोलभेंडा खेतीबाट रू. ८ करोड कमाएका छन् । गतवर्ष ललितपुरमा २ हजार टन गोलभेंडा उत्पादन भएको र २ हजार जनाले रोजगारी पाएको कार्यालयले बताएको छ ।
← एमाले संसदीय दलको नेतामा केपी ओली निर्वाचित
उत्तरी गोरखामा अनुदानका स्याऊ रोपिने →
भारतबाट ३ गुणा बढी तरकारी आयात
1,367 thoughts on “बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ ललितपुरका किसान”
quote motor vehicle insurance
buying insurance car